Faha-58 taonan’ny fahaleovantena : Nosantarina omaly tetsy Antsonjombe ireo seho samihafa
Raha vao miandoha ny volana jona, ny fankalazana ny fetim-pirenena no ao an-tsain’ny Malagasy. Homarihina ny 26 jona ny faha-58 niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, ary tsy diso anjara amin’izany ny fanolorana hetsika sy hafaliana ho an’ny …Tohiny
Mananara Avaratra : Milina mpamokatra herinaratra telo may kila forehitra
Najedaky ny afo ny sabotsy maraina lasa teo, tokony ho tamin’ny 05 ora tany ho any ny milina mpamokatra herinaratra miisa telo, tao amin’ny foibe toeran’ny Jirama ao an-tampon-tanànan’i Mananara Avaratra. Araka ny loharanom-baovao, dia …Tohiny
Fifandonana tany Miandrivazo : Zandary iray namoy ny ainy
Tafakatra telo ny isan’ireo zandary namoy ny ainy teo am-panatanterahana ny asany tamin’iny herinandro iny. Ankoatra ireo roalahy lavon’ny balan’ny dahalo tany amin’ny kaomina Bekofafa, distrikan’i Befotaka, ny 29 mey lasa teo mantsy, dia zandary …Tohiny
Ambatolampy : Ho modely amin’ny angovo azo havaozina
Ny filoham-pirenena ankehitriny Hery Rajaonarimampianina no nahavita fotodrafitrasa be indrindra mihoatra ireo mpitondra teo aloha nifandimby. Io no teny nohantintraterin’ny Filoha tamin’ireo lahateniny nandritry ny fitokanana ireo fotodrafitrasa maro vitany teto amin’ny firenena. Nambarany ampahibemaso …Tohiny